eHimalayatimes | विचार/साहित्य | शेयर बजारको वर्तमान अवस्था र चुनौती
22nd July | 2018 | Sunday | 3:17:58 AM
शेयर बजारको वर्तमान अवस्था र चुनौती
रिसव गौतम POSTED ON : Tuesday, 01 August, 2017 (1:22:18 PM)
शेयर बजार उकालो र ओरालो लाग्ने क्रम जारी रहनु स्वाभाविक हो । किनकि बजारलाई विविध तŒवहरू, हल्लाहरू र विषयहरूले निरन्तर प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । त्यसमा पनि नेपालको शेयर बजार परिपक्व नभइसकेको कारण बजारमा उतारचढावहरू आइरहनु अस्वाभाविक होइन । केही वर्षयता लगातार उकालो लागिरहेको शेयर बजार अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउन महिनापछि लगातार ओरालो लाग्यो । यसरी ओरालो लागिरहेको शेयर बजार २०७४ वैशाख यता पुनः सम्हालिँदै गएको देखिन्छ ।
खासगरी शेयर बजार यसरी ओरालो लागेसँगै नयाँ आएका धेरै उत्साहित लगानीकर्ताहरूको मनोबल गिरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामा १९०० को अंकमा पुगेको शेयर बजार मंसिर पुस पश्चात् पुनः १३०० अंकसम्ममा झरेको थियो । त्यसको प्रभावस्वरूप लगानीकर्ताहरूको मनोबल अझै उक्सिन सकेको छैन ।
खासगरी नेपालमा सन् १९३७ मा नेपाल बैंक र विराटनगर जुट मिलबाट सर्वसाधारणले पहिलोपटक कम्पनीहरूमा शेयर हालेका हुन् । यसबीचको झण्डै आठ नौ दशकको पेरिफेरीमा नेपालको शेयर बजारले एउटा ठूलो फड्को मारिसकेको छ । यतिबेला शेयर कारोबारलाई नै आप्mनो पेशा बनाउने र त्यसैमा रमाउनेहरू अचाक्ली बढेका छन् । पँुजीबजार नै अर्थतन्त्रको ऐना मानिने भएका कारण पँुजीबजारको विकास र फैलावट बढ्दै जानुलाई समग्र विकासको दृष्टिकोणबाट सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जति मात्रामा शेयर बजार व्यवस्थित र एउटा मान्यतामा एवं प्रणालीमा चलेका छन्, त्यो रूपमा नेपालको बजार चल्न त सकेको छैन । तर पनि यस क्षेत्रमा नेपालमा थुप्रै विकास र प्रयासहरू भएका छन् ।
धितोपत्र बोर्ड, अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेप्सेलगायत संस्थाहरूले यस क्षेत्रको व्यवस्थित विकासका लागि निकै प्रयास गरेको देखिन्छ । अहिले शेयर बजारमा एनआरएनको समेत लगानी भिœयाउने कुरा भइरहेका छन् । अनलाइन टे«डिङ र शेयर कारोबार गराउने संस्थाहरूको शाखा देशैभर विस्तार गर्ने प्रयास भइरहेका छन् । त्यसैगरी शेयर कारोबारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजाने र विदेशी लगानीसमेत भिœयाउने कुरा पनि भइरहेका छन् । त्यसकारण शेयर बजारको व्यवस्थित विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने पहल वा सोचहरू नभएका होइनन् । धेरै पहल र प्रयासहरू भएका छन् ।
तर पनि नेपालको शेयर बजारमा उत्पादनमूलक संघसंस्थाको सहभागिता भने ज्यादै नगन्य रहँदै आएको छ । खासगरी नेपालको शेयर बजारमा बैंक–वित्तीय संस्थाहरू, बिमा कम्पनीहरू, हाइड्रो पावर कम्पनीहरूकै वर्चश्व देखिन्छ । केही होटलहरू र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू रहे पनि उत्पादनमूलक कम्पनीहरू धेरै कम रहेका कारण यस क्षेत्रले देशको आर्थिक विकास र उत्पादन बढाउने कुरामा खासै योगदान पु¥याउन सकेको छैन । र, उत्पादनमूलक संघसंस्थाहरूलाई शेयरबजारमा ल्याउने कुरामा सम्बन्धित निकायले आवश्यक पहल गर्न सकेको छैन । तर पँुजीबजारमा उत्पादनमूलक संस्थालाई सँगसँगै लैजानुपर्ने चुनौती राज्यसामु छ । त्यसो गर्न सकिँदा मात्रै नेपालले औद्योगिक विकास र सम्भावनालाई पछ्याउन सक्छ । जुन अहिलेको आवश्यकता हो ।
तर अहिले नेपालको पँुजीबजार वास्तवमै बिचौलिया र चलाख एवं ठूला लगानीकर्ताहरूको पकडमा छ । उनीहरूले चाहँदा नेपालको शेयर बजारलाई उच्चाल्न पनि सक्ने र पछार्न पनि सक्ने अवस्था विद्यमान रहिआएको छ । त्यसै कारण एक त नयाँ लगानीकर्ताहरू यस क्षेत्रमा आउन डराउने गरेका छन् । अर्कोतर्फ डा. बाबुराम भट्टराईलगायतका पढेलेखेकै नेताले शेयर बजार भनेको जुवाको खाल हो भन्ने ढंगको अभिव्यक्ति दिएकाले उनीहरूको मनस्थितिमा नकारात्मकताको ह्याङओभर अझै मेटिएको देखिँदैन ।
निश्चय नै पँुजीबजार जुवाको खाल होइन । यो त समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने महŒवपूर्ण इन्जिन हो, जसको सही र सार्थक प्रयोगले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सबलीकृत गर्छ । त्यसकारण पँुजीबजारको विकास एवं विस्तार र यसलाई व्यवस्थित गराउने कुरा मुलुककै आर्थिक विकासका लागि अपरिहार्य छ । कसरी यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित र चलायमान बनाउन सकिन्छ । त्यसबारे राज्यले सोच्ने बेला आएको छ ।
हाल नेप्सेमा उत्पादनमूलक संस्थाहरूमध्ये पनि युनिलिभर, बोटलर्स र हिमालयन डिष्टिलरीजस्ता केही कम्पनीहरूले मात्र शेयर कारोबार जारी राखेको अवस्था छ । यसले पुँजी बजारमा भयंकर निराशा छरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा मात्र अधिकांश सर्वसाधारणले शेयर कारोबार गरिरहेको स्थिति छ । त्यसले के पुष्टि गर्छ भने, नेपालमा अझै लगानीसम्बन्धी जोखिम मोल्ने परिपाटीको विकास हुन सकिरहेको छैन । हरेक शेयर धनीहरूले वा लगानीकर्ताहरूले वित्तीय संस्थाहरूमा हुने सुरक्षित लगानीले मात्रै समृद्धिको आधार सृजना गर्न सक्दैन भन्ने यथार्थलाई मनन गर्नु आवश्यक छ । सामान्य अर्थशास्त्रको नियमअनुसार पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीविना उत्पादन बढाउन सकिँदैन, प्रतिफल त परकै कुरा भयो ।
त्यसले धनीलाई झन् धनी र गरिबलाई झनै गरिब बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नेछ । तसर्थ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा शेयर कारोबार सघनरूपमा विस्तार हुन जरुरी देखिन्छ । त्यसले मात्र रोजगारी र आर्थिक विकासको चाहना पूरा गर्न सक्छ । नेपाली शेयर बजारमा बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाबाहेकको सहभागिता किन बढ्न सकेको छैन ? त्यसको कारण पहिल्याउन जरुरी देखिन्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रका संस्थाहरू किन नेप्सेमा आइरहेका छैनन् र सर्वसाधारण किन त्यस क्षेत्रमा लगानी गर्न विश्वस्थ छैनन् भन्ने कुराको अनुसन्धान जरुरी छ ।
नेपाली पुँजीबजारलाई सृजनात्मक लगानी थलोको रूपमा विकसित गर्नु जरुरी छ । सर्वसाधारणमा पुँजीबजारप्रति सकारात्मक सन्देश प्रभाव हुनु आवश्यक छ । लगानीविना विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा चुलिएको आजको दुनियाँमा विकास निर्माण कथामा मात्र सीमित हुनपुग्छ । नेपालमा भएका स्वदेशी उद्योगहरूको उत्पादन र व्यवस्थापनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजान सके र शेयर बजारमार्फत विदेशीहरूको पनि लगानी त्यस्ता उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा ल्याउन सके निश्चय नै फलदायी हुनसक्छ । यसरी नेपालको शेयर बजारमा विदेशीहरूको समेत आकर्षण जगाउन सक्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय नेपाली व्यावसायिक जगतमा जोखिम मोल्ने परिपाटी हराउँदै गएको छ । सुरक्षित लगानीमै व्यवसायीहरू रमाउँदै गएका छन् । दीर्घकालीन लगानी गर्ने परिपाटी हराउँदै जाँदा पनि शेयर बजारमा उत्पादनमूलक क्षेत्र पछि परेको हो । त्यसो हुनु भनेको शेयर बजारप्रति नै जनविश्वास छैन भन्ने पनि हो । बैंकिङ क्षेत्रमा हुने लगानीमा अलिकति उतारचढाव आउनासाथ शेयर बिक्री गरी सुरक्षित रहन पाउने अवसरले पनि पँुजीबजार अस्थिर बन्दै गएको स्थिति छ । हरेक विकसित मुलुक पुँजीबजारको दरिलो सहायताबाट समृद्धिको खुड्किलो चढ्दै आएका छन् । नेपालले त्यस्ता देशहरूबाट अनुभव लिन जरुरी छ । केही हदसम्म सरकारले शेयरमा लगानी गर्दा १० लाखभन्दा धेरै रकममा स्रोत खुलाउनुपर्ने सीमा बढाएर १ करोड बनाएको छ । यसले पनि शेयर लगानीकर्तामा ठूलै राहत मिलेको देखिन्छ ।
धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय लगायतका अर्थ क्षेत्रका महŒवपूर्ण संस्थाहरूले जसरी शेयर बजारलाई व्यवस्थित गराउने प्रयास गरेका छन् । त्यसैगरी यस क्षेत्रलाई अझै अनुशासित, मर्यादित र लगानीमैत्री बनाउन जरुरी छ । शेयर बजारमा नयाँ र दीर्घकालीक रूपमा लगानी गर्ने सोच भएकाहरूको लगानी भिœयाउन अर्थसम्बद्ध निकायहरूले आवश्यक जनचेतना र तालिमको प्रबन्ध मिलाउन जरुरी छ । आर्थिक विकासलाई टेवा पुग्ने गरी भूमिका खेल्ने आर्थिक पत्रपत्रिका, अनलाइन तथा आर्थिक कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउन आवश्य सरकारी सहयोग प्रदान गर्न आवश्यक छ । आर्थिक चेतनाबिना कुनै पनि मुलुकले आवश्यक विकास र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । त्यसकारण शेयर बजार, उद्यमशीलता विकास, उद्योग कल कारखानाको विकास गर्न मद्दत गराउने प्रकारका सञ्चार माध्यमलाई अझै यस क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ । त्यसो गर्न सकिँदा मात्रै मुलुकले आर्थिकरूपमा पनि केही फड्को मार्न सक्छ ।